यस कारण खानुहोस् मूला, रोग निको पार्ने उत्तम औषधि - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
यस कारण खानुहोस् मूला, रोग निको पार्ने उत्तम औषधि
प्रकाशित मिति: १८ आश्विन २०७५, बिहीबार
काठमाडौं । नेपाली भान्सामा प्रायः नटुट्ने मूला पाइल्स रोग निको पार्ने उत्तम औषधि हो । मूला नियममित खानाले पाइल्स रोग एक महिनामै निको हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् । मुलाको नियमित र सही प्रयोगबाट पाइल्ससम्बन्धी समस्या एक महिनामै समाधान हुन्छ भने पाइल्स लाग्नबाट नै बच्न समेत सकिन्छ ।
पाइल्स एउटा यस्तो रोग हो, जसमा शरीरका विशेष हिस्सामा हरेक समय पीडा र जलन महशुस हुने गर्दछ । चिकित्सकहरुले पनि पाइल्सका रोगीहरुलाई खान सल्लाह दिने गर्दछन् । आखिर मुला नै पाइल्सको अचुक औषधी हुनुको कारण के हो त ?
मुलामा डाइट्री फाइबर्स पाइने गर्दछ । यसले निष्काशन हुने दिसालाई मुलायम गर्न सहयोग गर्दछ । यसबाट पाचन प्रक्रिया पनि राम्रो हुन्छ । मुलामा कयौं यस्ता तत्व पाइन्छन्, जुन पाइल्स भएपछि हुने पीडा कम गर्न सहयोगीसिद्ध हुन्छन् ।
यसका साथै मुलाले शरीरलाई चिसो बनाउने काम पनि गर्दछ, जसबाट जलनमा पनि राहत प्राप्त हुन्छ । पाइल्स रोगीले काँचो मुला सेवन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तपाई चाहनु हुन्छ भने यसलाई पिँधेर पनि सेवन गर्न सक्नु हुन्छ । अझ तपाई मुलाको रस निकालेर पनि पिउन सक्नु हुन्छ ।
मुलाको प्रयोग संक्रमित स्थानमा जलन शान्त पार्न समेत लगाउन लगाउन सकिन्छ । मुला सहज नपाइएमा बजारमा पाइने मुलाको पाउडर समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
हरितालिका तीज मनाइँदै,शिवालयहरूमा महिलाको घुइँचो
काठमाडौं । भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिनमा मनाइने हरितालिका (तीज) पर्व आज देवादिदेव महादेवको पूजा आराधना गरी […]
अखिलको निर्वाचन अझै अन्योलमा
फागुन ५ । काठमाडौं, अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको २२ औँ महाधिवेशन लम्बिएको लम्बिएै छ । […]
‘संजू’ले दुई दिनमा कति कमायो ?
एजेन्सी । बक्स अफिसमा फिल्म ‘संजू’ले राम्रो व्यापार गरेको छ । यस फिल्मले बक्स अफिसमा धमाका नै मच्चाएको […]
ज्याक्स कालिसको नजरमा विराट कोहली महान हुनुको कारण यस्तो छ
एजेन्सी । दक्षिण अफ्रिकाका महान क्रिकेटर ज्याक्स कालिसले पनि भारतीय क्रिकेटर विराट कोहलीलाई महान खेलाडी […]
गृहमन्त्री बादलको ठूलो जित, यातायातमन्त्री महासेठ भए ब्याक
काठमाडौं । सरकारले यातायात समिति नवीकरण नगर्ने भएको छ । सरकारले सार्वजनिक यातायातमा सुधार ल्याउन एकाधिकार […]
एसियन प्रिमियर लिग नेपालमा हुने
२८ जेठ, काठमाडौं । एसियन प्रिमियर लिग टी(ट्वान्टी क्रिकेट प्रतियोगिता नेपालमा हुने भएको छ । आइतबार पत्रकार […]